यी:हुन् अष्ट्रेलियामा श्रीमतीको कु’टाइबाट मा’रिएका नेपाली क्रिकेटर सन्तोष, सी’सीटीभीमा यस्तो देखियो ! – Life Nepali
यी:हुन् अष्ट्रेलियामा श्रीमतीको कु’टाइबाट मा’रिएका नेपाली क्रिकेटर सन्तोष, सी’सीटीभीमा यस्तो देखियो !
काठमान्डौ। अष्ट्रेलियामा श्रीमतीले धा’रिलो ह’तियार प्र’हार गर्दा मृ’त्यु भएका ३४ बर्षीय नेपाली नेपाली क्रिकेट खेलाडी ३४ बर्षका सन्तोष गौतम रहेको खु’लेको छ । उनकी श्रीमती ३४ बर्षकै नु’मा गौतमले धा’रिलो ह’तियार प्र’हार गर्दा सन्तोषको शनिबार राती मृ’त्यु भएको थियो । सन्तोष अष्ट्रेलियाको नेपाली स’मुदायका च’र्चित नेपाली खेलाडी हुन् ।अष्ट्रेलियाको ग्रा’न्सभिलमा भएको उक्त घ’टनाभन्दा केही अ’गाडिको सी’सीटीभी फु’टेज पनि सार्वजनिक भएको छ । उ’क्त फु’टेजमा सन्तोषको जी’वनको अ’न्तिम क्ष’ण कै’द भएको छ ।
शनिबार बेलुका ६ बजे घर फ’र्कदै गर्दा उ’क्त भि’डियो कै’द भएको थियो ।त्यसपछि गौतम द’म्पत्तिबी’च झ’गडा भएको र श्रीमती नु’माले सन्तोषको पा’खुरामा धा’रिलो ह’तियार प्र’हार ग’रेको जनाइएको छ । बेलुका साढे ७ बजे प्रहरी घ’टनास्थलमा पुग्दा श्रीमान अ’चेत अ’वस्थामा थिए भने श्रीमती पनि घा’इते अवस्थामा थिइन् ।ग’म्भीर घा’इते भएका श्रीमानलाई न’जिकैको अस्पतालमा लगिएको थियो ।अस्पतालमा उपचारका क्र’ममा उनका नि’धन भयो । उनको स्था’यी घर नेपालको रुपन्देही भएको ज’नाइएको छ।
उनी हरुकी ८ बर्षकी छोरी समेत छिन् ।’ श्रीमानको ह’त्याको अ’भियोगमा प्रहरीले नु’मालाई नि’यन्त्रणमा लिएको छ । उनलाई पा’रामाथा बे’ल को’र्टमा पे’श गरिएकोमा नु’माले ध’रौटीमा रि’हा हुनका लागि अ’नुरोध नगरेको जनाइएको छ । उनलाई प्रहरी हि’राशतमा नै रा’खिएको छ भने विहिबार अदालतमा पे’श गरिनेछ ।
Previous स्मार्टफोनका कमजोरी पत्ता लगाइदिनेलाई गुगलले १७ करोड रुपैयाँसम्म पुरस्कार दिने
Next कतारमा नेपाली कामदारले पाए साढे ४ लाख इनाम